Indonesia in Focus: Hadiyadda Ilaah binu-aadmiga oo dhamaystiran.
Hadiyadda Ilaah binu-aadmiga oo dhamaystiran.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (330)
(Qaybta saddex boqol iyo soddon), Depok, West Java, Indonesia, August 3, 2015, 13:47 pm)
Hadiyadda Ilaah in nin (deggan) ee ku nool dhulka uu yahay mid aad dhamaystiran oo kaamil ah, Ilaah u abuuray aadanaha oo lagu daro jidhka bini'aadamka dhamaystir u dhigtaa shanta dareeme iyo maskaxda, waxay sidoo kale ku siinaysaa hadiyadda in ay dadka dhulka deggan oo ah qaab roobka.
Laga soo bilaabo biyahan lifelike, dhirta kale ee badan nolosha xoolaha, biyaha ayaa sidoo kale beeraha, bariiska iyo sarreen, oo hadhuudh u ​​barwaaqoobi karaa, xoolaha ayaa sidoo kale si fudud u cuni cawska ama caleemaha qayb ahaan waa inta u dhaxaysa hilibka iyo caanaha xoolaha in ay yihiin waxtar u leh aadanaha.
In Aayaadka Quraanka Suurad Al Muminun 17-22 Eebe wuxuu leeyahay, in Ilaah kan ku Abuuray Samooyinka todobada ah iyo Dhulka iyo waxa ku jira oo ay ka mid Korkiinna hadiyado foomka roobka.
Wadamada in dhif roob kasta oo Ilaah hadiyado uu foomka oo biyo ah, sida ilo ka ciidda iyo biyaha badda siinayaa. Maxaa yeelay, technology Warshad in distill kartaa biyaha badda u galaan biyaha cusub ee hadda bacrimiya geedaha iyo beeraha oo jira in Saudi Arabia, Cumaan iyo dalal kale oo Carabta.
In dalalka ay ku nool waxaa runtii waa shukriya Nicmada Eebe siin doontaa hadiyado, biyo ku filan, Xoolo dabiiciga ah ee dhulka, badda, iyo hufnaan nolosha kale.
Haddii aad eegto taariikhda ku jirta Quraanka, sida dadka ah (ummad) ma aha shukriya Nicmada Ilaah iyo xitaa ka hor Nabiga iyo Rasuulkiisa waxaa mar kasta la siiyaa ciqaabta Ilaah oo ah qaab narrowness nolosha (Risqi) sida abaaraha, roob si joogto ah ilaa sababta daadad iyo dhul, si ay u dumiyaan qaar iyaga ka mid ah, ma jirtaa quruun burburiyeen gebi ahaanba (marka laga reebo qayb yar oo aan weli aamin) iyo bedelay dad cusub, sida ay ummadu (dadka) oo Maanshaynay daad Nuux daad in mahelaan.
Mid ka mid ah aanu ugu mahad celinayaa Ilaah, si aannu mar walba la siin istareexsan nolosha fiican ee nolosha adduun iyo aakhiraba (Looxul Maxfuudka).
Al-Quraanka Surah Al Mu'minun Aayadda 17-22
Tarjamada Surah Al Mu'minun Aayadda 17-22
17.  Waxaa Dhab ahaan, waxaan Abuuray toddoba Samo oo aad  kor ku xusan, oo ma waxaan nihin mid Khalqiga Halmaansan (na) .
18 Oo waxaan dejiyey Samada Biyo waxaana soo dajinnay samada ee size , oo waxaana u si ay u degaan ee dhulka ee biyaha , oo sida xaqiiqada ah waxaan ay awoodaan in ay iyaga ka  baabi'iyo.
19. Markaasaa (biyaha), Waxaan dooggu aad Beero Timir ah iyo Cinabyo taariikhda ; waxaa  aad ka heli midhihiisa waa badan iyo qaar ka mid ah (midho) in aad cuntaan,
20 Markaasaa (Dhab ahaan waxaan nahay) geedo (Saytuun) oo koray Buur Siinay ka soo , oo soo saarta Subag, iyo wax warshad dhadhankii loogu talo galay dadka cuni .
21 Oo runtii, in xoolaha  waxaa jira waano aad  for. Waxaan ku yaal waxaa kale oo jira faa'iidooyin badan oo aad  for idinka Waraabinnaa ka (caano) ka jira caloosha , iyo, iyo qaar ka mid ah waa inaad ku cuntaan,
22 Oo on dhabarka xoolaha , iyo (sidoo kale) ee maraakiibka korkooda aad gaadiid .
Isku dar ISLAM IYO DUNIDA SAYNISKA Syar'i